Farmaajo Oo Nairobi Kulan Kula Yeeshay Xubno Ka Soo Jeeda Beesha Warsangali Oo Maraykanka Ka Yimid Iyo Dabinada Cali Khaliif Ee Khaatumo State | Marsa News
Farmaajo Oo Nairobi Kulan Kula Yeeshay Xubno Ka Soo Jeeda Beesha Warsangali Oo Maraykanka Ka Yimid Iyo Dabinada Cali Khaliif Ee Khaatumo State
November 12, 2019 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Madaxwaynaha maamulka somaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku sugan magaalo madaxda wadanka kenya ee Nairobi, ayaa kulano halkaa kula yeeshay xubno hayb ahaan ka soo jeeda beesha warsangali oo ka soo baqoolay cariga maraykanka.
Ujeedada kulanka farmaajo iyo xubnahan maraykan ka yimid ee beesha warsangali ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagaga arinsanayay qadiyada gudoomiyihii baarlamaanka puntland dhawaan laga qaaday waxii lagaga jawaabi lahaa iyo waliba qorshyaal kale oo ku wajahan sidii badhan loogaga dhawaaqi lahaa maamul goboleed uu gudomiyihii hore ee baarlamaanka puntland, Dhoobo Daarood uga noqon lahaa madaxwayne halkaasi.
Qorshahan oo ay wada dajiyeen Cali Khaliif Galaydh iyo farmaajo ayaa ah mid loogu talagalay in gobolada sool, sanaag iyo cayn ay noqdaan gobolo si qabaliya loogu sameeyo maamul goboleed hoos taga somaliya.
Kulanka ay wada yeesheen farmaajo iyo xubnaha beesha warsangali ka soo jeeda ee ka qabsoomay nairobi ayaa laga soo warinayaa inuu ku dhamaaday is afgarad.
Dhawaan ayay ahayd markii Cali khaliif galaydh iyo farmaajo kulan fool ka foola ah ku yeesheen muqdisho iyagoo qorshahooda rasmiga ahi uu ahaa in maamulkii khaatumo state la dardar galiyo, taasi oo ay hore iskula qaateen, balse xaalada imika ee gudoomiyihii baarlamaanka putland laga caydhiyay ay soo dadajisay qorshahii farmaajo iyo cali khaliif.